Top Yoga Retreats tany Eoropa sy Hanao Ahoana ny Dia By Train | Save A Train
Home > Yoga in Europe > Top Yoga Retreats tany Eoropa sy Hanao Ahoana ny Dia By Train
(Last Nohavaozina: 20/02/2020)
Raha izay tadiavinao ho afa-mandositra ny ambony yoga, retreats any Eoropa noho ny ny vakansy manaraka, ianao in vintana. Ny sasany amin'ireo firenena Eoropeana tsara tarehy indrindra voky hanatitra raha ny amin'ny ny yoga sy ny fialam-boly. Na dia India dia heverina ho toerana ny yoga indrindra eto amin'izao tontolo izao, Eoropeanina no tena naka ny fomba fanao, ary efa nanaiky izany ho toy ny. Ireto ny sasany amin'ireo ambony yoga, retreats any Eoropa, ary koa ny fomba ny mahazo any lamasinina:
Yoga Retreats in Italia
Beautiful, mampitony toerana manodidina dia afaka tokoa ny yoga, manandratra fanao - tsy lazaina intsony ny rivotra madio sy ny masoandro. Raha izany no tadiavinao, Ary Italia no fitoerana ho anareo Aho. Rehetra ny tsara tarehy ny yoga fisintahana toerana mba haka avy, isika fitia ireo izay Tuscany. Afaka maka Toerana mahafinaritra mitaingina fiaran-dalamby ny alalan 'ny faritra sy hifarana ilay dia amin'ny yoga, fisintonana in tavoahangy. mankafy ny masoandro, divay sy mitoetra hahatsiaro sy ankehitriny - inona no mety ho tsara kokoa?
Perugia ho Castellina tavoahangy Lamasinina
Yoga Retreats any Frantsa
Ho anareo tia ny tendrombohitra, Frantsay Alpes handeha ho fahafahana ianao tsy tara. Hafa noho ny tsy tapaka ny yoga, in French Alpes, retreats yoga, afaka atao tongotra lavitra, ny yoga, ny rano fotsy Rafting, ary na dia paragliding. Annecy dia tanàna lehibe hitsidika noho izany tanjona, ary afaka mahatratra izany lamasinina avy Paris. Tena traikefa nahafinaritra tokoa mety amin'ny olona tia kokoa fiainana mavitrika.
Paris ho Annecy Lamasinina
Geneva ho Annecy Lamasinina
Yoga Retreats ao amin'ny UK
Ny UK manana Toerana mahafinaritra be dia be, mahatalanjona toerana mba hihemotra ny, toy ny Glastonbury, Devon, Kent, Scotland, ary ny hafa. Na izany aza, mbola kokoa London noho ny tsy manam-paharoa sy ny rivotra toe-tsaina. Raha tadiavinao kokoa ny yoga fisintahana an-drenivohitra traikefa, avy eo London ny safidy tsara. Ny isan'ny safidy hahatonga ny lohanao kofehy ireny - misy zavatra ho an'ny rehetra ny yoga hanandrana. Afaka tonga mora foana ny tanàna lamasinina avy amin'ny ankamaroan'ny tanàn-dehibe any Eoropa, ka izany no tombony hafa.
Alemaina maka ny Wellness ho zava-dehibe, ary matetika ny yoga Mitambatra ny fomba fanao amin'ny Spa feno traikefa. Tena mety tsara ny fialan-tsasatra rehefa te-recharge ny vatoaratra sy ny hanalavitra ny somebiseby erỳ fiainana. Alemaina mihitsy aza manolotra mangina tanteraka retreats, miaraka be dia be ny fomba mindfulness fisaintsainana ary ny sasany Spa lehibe fitsaboana. Mamela ny fahanginana sy ny fihavanana ny natiora mba hanasa ny adin-tsaina izy dia fomba fahandro tsara ho an'ny fialam-boly. Raha toa tahaka ny zavatra mety mila, dia afaka boky ny lamasinina ho any amin'ny Bavarian Nanketo Alpes eto.
Frankfurt ho any Munich Lamasinina
Vienna ho any Munich Lamasinina
Stuttgart any Munich Lamasinina
Aotrisy tia ny ririnina ny yoga retreats, izay mahatonga azy ho toerana tonga lafatra nandritra izany fotoana izany ny taona. Nahoana raha hiaina ny vanim-potoana amin'ny rehetra ny voninahiny? Na dia mankahala ririnina, ianao mba hahatakatra ny fomba maintsy yoga, any Aotrisy retreats ataovy blissful. Izy ireo mandray ny hatsiaka Weather sy hiverina ho any amin'ny rafitra ara-pahasalamana-mampiroborobo, fampidirana fomba isan-karazany ny yoga,, fiakaran'ny sy am-pilaminana matory mba hampitombo ny hery fiarovana. Salzburg dia iray amin'ireo tanàna Aotrisy izay afaka mahatsapa izany, ary afaka mahatratra izany lamasinina.
Prague ho Salzburg Lamasinina
Vonona noho ny nofy ny yoga getaway any amin'ny iray amin'ireo toerana ambony any Eoropa? Boky ny saran-dalana fa iray amin'ireo ambony yoga, retreats tany Eoropa tany am-boalohany ho an'ny tsara indrindra efaha amin'ny seza!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/yoga-retreats-europe-train/ - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / andehilahy ny / de na / ru sy ny maro hafa fiteny.
#misaintsaina #peacefulness #relaxation #Yoga europetravel Train Travel
Best fety tany Eoropa sy aiza no ahitana azy ireo
Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel UK, Travel Europe